Jadwalka shaqo ee Guddiga doorashada Soomaaliya oo la shaaciyay – Radio Daljir
Jadwalka shaqo ee Guddiga doorashada Soomaaliya oo la shaaciyay
Juunyo 21, 2021 5:31 g 0
Guddiga farsamada Arrimaha doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa faahfaahiyay Jadwalka iyo nooca tababarka ay qaadanayaan xubnaha Guddiyada doorashooyinka.
Abuukaate Cumar Dhagey oo ka mid ah xubnaha kooxda farsamada Arrimaha Doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in 27-ka bishaan Gudiyadda doorashooyinka uu u furmi doono tababar socon doona afar maalmood.
“Tababarka la siinayo Guddiyada waxa uu ku saabsan yahay qabsoomida doorshooyinka heer Federaal iyo heer dowlad Goboleed, iyadoona la isku keenayo dhammaan xubnaha oo haatan kala maqan.”ayuu yiri Avv Dhagay.
Dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada ayaa dhammaan soo wada magacaabay xubnaha Guddiyada doorashooyinka ka shaqeyn doona, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda si rasmi ah loo guda galo howlaha doorashada dalka ka dhaceysa.
Caawa & Daljir iyo Xuseen Madar , Daljir Garoowe (dhegayso)